Xiaomi dia hanolotra ny famantaranandrony miaraka amin'ny Wear OS amin'ny 5 Novambra | Androidsis
Vao iray volana mahery izay no nanomboka ny tsaho ny fisian'ny smartwatch Xiaomi izay hampiasa Wear OS amin'ny maha rafitra miasa azy, araka ny efa nolazainay taminao. Nandritra ny herinandro maro dia namoaka antsipiriany misimisy kokoa, na dia tsy dia mahalala loatra amin'ny fomba mivaingana aza isika. Ny hita mazava dia tsy ho ela ny fampisehoana ofisialy azy.
Satria ny zava-drehetra dia manondro an'i Xiaomi handeha asehoy amin'ny fomba ofisialy ny famantaranandro amin'ny herinandro ho avy. Ho fanampin'izay, efa azonao ny famolavolana an'ity smartwatch ity, izay mampatsiahy fatratra ny maodely iray hafa izay efa fantatsika tsara eo amin'ny tsena. Ka azo antoka fa hisy ny hevitra.
Ny fampisehoana an'ity smartwatch ity hotontosaina amin'ny 5 Novambra. Antenaina fa ho daty hanoloran'i Xiaomi ihany koa ny CC9 Pro ihany koa, izay maro ny fivoahana amin'ity herinandro ity. Amin'izany fomba izany, ny marika sinoa dia hamela antsika amin'ny famantaranandrony voalohany izay hampiasa Wear OS. Mety ho fanentanana ho an'ity rafitra ity izany.
Ny famolavolana famantaranandro dia tsy hamela anao tsy hiraharaha, araka ny tiana holazaina. Hatramin'ny sary nakarin'ny marika sinoa dia toa mazava izany endrika mitovy amin'ny Apple Watch. Ka azo antoka fa misy ny fitsikerana ny fiambenana ny orinasa.
Momba ny anaran'ity famataranandro ity dia tsy misy voamarina. Amin'ny haino aman-jery sasany dia miresaka momba ny Xiaomi Mi Watch izy ireo, izay mety ho anarana nofidin'ny orinasa. Na dia azo antoka aza fa hamela fisalasalana momba izany vetivety isika, satria azo inoana fa hisy fivoahana bebe kokoa.
Hihaino tsara ireo angona fanampiny izay ho tonga amin'ity famantaranandro voalohany ity izahay miaraka amin'ny Wear OS izay hatolotr'i Xiaomi fotoana fohy. Fandefasana izay azo antoka fa mahaliana. Ankoatry ny fahefana Ampio hatanjaka ity rafitra miasa ity, izay mbola tsy ny fahombiazan'ny Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia hanolotra ny famantaranandrony miaraka amin'ny Wear OS amin'ny herinandro ambony